30 Caruur ah oo saameynta Abaarta darteed ugu geeriyootay Isbitaalka Kismaayo. - News Inside Point
June 24 (Jowhar.com)-Isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaa la dhigay caruur aad u da’yar, kuwaasoo laga keenay deegaano kamid ah gobolka Jubbada Dhexe oo ay gabi ahaantiisba maamusho kooxda Al-Shabaab.
Wararka la helayo waxey sheegayaan in gudaha isbitaalka ay nafaqo daro ka dhalatay abaarta baahsan ee ku dhufatay dalka ay ugu geeriyiodeen kudhawaad 30 caruur ah ah oo ka soo jeeda qoysas danyar ah.
Faysal Aadan Ibraahim oo ah Madaxa qaybta Nafaqo-darrada ee Isbitaalka Kismaayo waxa uu sheegay in ku dhawaad 400 oo ruux oo ah qoysaska saameynta taban ku reebtay Abaarta lagu daweynayo Isbitaalka Magaalada Kismaayo kaddib xannuuno ay ka qaadeen cunno la’aanta & Biyo yarida jirta.
“Qoysaska ugu badan ee carruurta nafaqo-darrada u geeriyootay iyo kuwa gacanta lagu hayo waxa ay kasoo barakaceen Gobolka Jubada Dhexe, ku dhawaad 30 carruur ayaa u geeriyootay nafaqo-darro ka dhalatay Abaarta gaar ahaan cunno iyo biyo la’aanta ka jirta deegaannadii ay ku noolaayeen” ayuu yiri Faysal Aadan Ibraahim.